အလုံ Orchid Condo တွင် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။ - ငှါးရန် - အလုံ (Ahlone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 2,800 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-12297191 ::: iMyanmarHouse.com
အလုံ Orchid Condo တွင် အခန်းငှားရန်ရှိသည်။
0943098621, 09428013834, 0973052642
25 Feb 2017 12:41 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
323 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
အလုံ Orchid Condo အလုံလမ်းမ
(2050sqft) ၊ မာစတာအိပ်ခန်း -3ခန်း . အဲကွန်း -5လုံး . ပရိဘောဂ . အင်တာနက် . Skynet ပါကေး ပြင်ဆင်ထား နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်ရန် ရုံးခန်းများဖွင့်ရန် သင့်တော် အမြန်ငှားမည်။
အလုံမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသဖြင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူအဆင်ပြေသည့်အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် အသားငါးဈေး၊ သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်း တို့ကိုလည်း မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သွားရောက်သွားနိုင်သည့် နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အလုံ ဈေးအနီး17'x50'2Floor ပြင်ပြီးတိုက်ခန်းအားငှားပါမည်။
P.M.S Real Estate Services
No.334 , Industrial(1) Lane ,Yankin T/S,Yangon.